बहुउपयाेगी माछा खानमा काइदा, माछाले गर्छ यति धेरै फाइदा – Khabar Art Nepal
By खबर आर्ट नेपाल	 On २२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १६:४०
माछाः ओमेगा ३ एसिडको प्रमुख स्रोत : त्यसरी माछा खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुनुको एउटा प्रमुख कारण माछामा पाइने ओमेगा–३ (Omega-3) नामाकरण गरिएको बोसोयुक्त एसिड नै हो । ओमेगा–३ हाम्रो शरीरमा भएका सम्पूर्ण कोषहरुको झिल्लीको निर्माण र गतिविधिहरुमा सक्रिय हिस्सा रहने एउटा प्रमुख अणु हो । विशेष गरेर माछाको तेलमा पर्याप्त मात्रामा पाइने ओमेगा–३ का अणुहरुको समूहलाई DHA भनिन्छ । विशेष गरेर ओमेगा–३ ले मस्तिष्क र आँखाको रेटिनाका स्नायुतन्त्रिकाहरुको निर्माण र गतिविधिहरुमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । शरीरका कुनै पनि तन्तुहरुको निर्माण, विकास र बृद्धि हुनमा ओमेगा ३ एसिडको अनिवार्य आवश्यकता पर्छ ।
आमाको गर्भमा छँदा पहिलो ३ महिनासम्म बच्चाको मस्तिष्क र आँखाका अंगहरु निर्माण र विकासमा ओमेगा–३ को अनिवार्य आवश्यकता पर्ने गर्छ । त्यसपछि पनि हामी बाँचुञ्जेलसम्म पनि यस एसिडले जीवनका प्रत्येक क्षणमा हाम्रो शरीरको विकास गर्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन तथा निश्चित प्रकारका रोगहरु र संक्रमणबाट जोगाउन प्रभावकारी काम गरिरहेको हुन्छ । माछाको तेलमा पाइने ओमेगा –३ ले हाम्रो जीवनकालका विभिन्न चरणहरुमा र विभिन्न समस्याहरुमा के कस्तो असर पार्छ वा भूमिका खेल्छ त ? आउनुहोस्, संक्षेपमा खोतलखातल गरौं ।
भ्रुण र बाल्यकाल : आमाको गर्भमा बच्चा हुँर्कदा मस्तिष्क र स्नायु प्रणालीले ओमेगा–३ अर्थात् DHA ग्रहण गर्न थाल्छ । DHA ओमेगा–३ का अणुहरुको संयोजनबाट बन्ने गर्छ, जुन मुख्य गरेर माछाको तेलमा पाइने गर्छ । मस्तिष्कका तन्तुहरुको निर्माणका लागि, स्नायु तन्त्रिकाहरुको विकासको लागि र आँखाको रेटिनाको लागि DHA अनिवार्य र महत्वपूर्ण तत्व हो । जन्मनुपूर्व बच्चाले यो DHA आमाको गर्भबाट प्राप्त गर्छ भने जन्मिसकेपछि चाहिँ आमाको दूधबाट यो तत्व प्राप्त गर्ने गर्छ ।
बच्चाहरुको मानसिक विकासमा ओमेगा ३ को प्रभावबारे विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन् । त्यस्तै एउटा अध्ययनले पर्याप्त मात्रामा ओमेगा–३ को आपूर्ति भएका ४ महिनाका बच्चाहरुको मानसिक क्षमता ओमेगा ३ नपाउने बच्चाहरुको तुलनामा निक्कै उच्च रहेको देखिएको थियो । तिनै बच्चाहरुलाई ६ वर्षको उमेरमा पुनः परीक्षण गर्दा पनि उनीहरुमा समस्या समाधान गर्ने तथा चाँडो र राम्रो निर्णय लिने क्षमता विकास भएको पाइएको थियो ।मानिसको स्वास्थ्यको जग भनेको बाल्यवस्थामा उनको शारीरिक स्वास्थ्य कस्तो थियो भन्नेमा निर्भर गर्छ । नियमित रुपमा पर्याप्त मात्रामा ओमेगा–३ को आपूर्ति भएका मानिस पछिसम्म स्वास्थ्यको दृष्किोणले निरोगी हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएको छ ।
दम र एलर्जी : विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ– शरीरमा ओमेगा–३ एसिडको आपूर्तिमा कम भयो भने एलर्जीका विभिन्न समस्याहरु देखापर्न थाल्छ ।अस्ट्रेलियाको यूनिभर्सिटी अफ सिड्नीमा गरिएको एक अध्ययनबाट के पत्ता लागेको छ भने नियमित रुपमा माछाको तेल –ओमेगा ३ एसिड) खाने गरेको बच्चामा दमले समात्ने खतरा४ गुना कम हुन्छ । अरु अध्ययनहरुले पनि के देखाएको छ भने माछाको तेल cystic fibrosis लगायत फोक्साका विभिन्न रोगहरुको उपचारमा समेत उपयोगी हुन्छ ।
किशोरावस्थामा देखापर्ने आक्रमकता वा आक्रोश : किशोरावस्थामा सानो तनाव हुँदा पनि उनीहरु आक्रामक हुने तथा आक्रोश देखापर्ने कुरा सामान्य हो । तर किशोर विद्यार्थीहरुमाथि गरिएको अध्ययनहरुले देखाएको छ– शरीरमा पर्याप्त मात्रामा ओमेगा–३ को आपूर्ति भएका किशोरहरुमा तनावग्रस्त अवस्थामा पनि आक्रमकता तथा आक्रोशको भावना कम हुने गर्छ । केही अनुसन्धानकर्ताहरुको विचारमा किशोरावस्थामा देखापर्ने आक्रमक व्यवहार तथा अनावश्यक आक्रोशको एउटा मुख्य कारण ओमेगा–३ को कम आपूर्ति वा अभाव हुनुपर्छ ।
वयस्कमा देखापर्ने मानसिक अवसाद वयस्क अवस्थाका कतिपय मानिसहरुमा मानसिक अवसाद अर्थात् डिप्रेशन देखापर्ने गर्छ । त्यस्ता मानिसहरुको अध्ययन गर्दा के देखिएको छ भने तिनको रगतमा ओमेगा–३ को मात्रा निक्कै कम हुने गर्छ । मानसिक अवसादमा ओमेगा–३ को प्रभावबारे अध्ययन गर्ने क्रममा डिप्रेशनका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेका त्यस्ता केही रोगीहरुलाई माछाको तेल (ओमेगा–३) खुवाएर परीक्षण उपचार गरिएको थियो । करीब ४ महिनाको उपचारपछि तिनीहरुको अवस्थामा निक्कै सुधार भएको थियो ।
आक्रमकता,मानसिक अवसाद र आत्महत्या : विकसित मुलुकहरुमा युवाहरुमा आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति निक्कै उच्च रहेको छ । विशेष गरेर युवाहरुको स्वभावमा आक्रमकता बढी हुने र उनीहरु बढी अवसादले ग्रस्त हुने कारण छिट्टै आवेगमा आएर आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनमा के देखिएको छ भने, शरीरमा 5HIAA serotonin नाम गरेको तत्वको कमी हुँदा मानिसमा आत्महत्या गर्ने चाहना बढ्ने र उनीहरु बढी आक्रमक हुने
गर्भावस्थामा फाइदा : महिलाको गर्भावस्थाको अन्तिम तीन महिनामा ओमेगा–३ एसिडको आपूर्तिको ठूलो महत्व रहन्छ । किनभने यस समयमा नै मानिसको मस्तिष्कको ७० प्रतिशत भन्दा बढी कोशिकाहरुको विकास हुने गर्छ । यस अवस्थामा आमाको खानेकुरामा पर्याप्त मात्रामा ओमेगा–३ को आपूर्ति हुनु जरुरी हुन्छ । कतिपय विशेषज्ञहरु त के ठान्छन् भने मानिसको मस्तिष्कमा DHA अत्यधिक मात्रामा हुने गर्छ र नयाँ जन्मने बच्चाको लागि जरुरी पर्ने DHA को प्रमुख आपूर्ति स्रोत पनि आमाको मस्तिष्क नै हो ।
विभिन्न देशहरुको तुलनात्मक अध्ययनबाट के देखिएको छ भने माछा नखाने देशका नवजात आमाहरुमा बच्चा जन्मेपछि हुने डिप्रेसनको दर उच्च रहने गरेको छ । यसो हुनुको एउटा कारण गर्भावस्थामा बच्चा निर्माणको प्रक्रियामा DHA को बढी खपत हुनु तर त्यसको तुलनामा आपूर्ति कम हुनु हो भन्ने अनुमान गरिएको छ तर यो कुराको पुष्टि भने भइसकेको छैन ।
गर्भावस्थामा ओमेगा–३ को महत्व कतिसम्म छ भने यो तत्व आमाले पर्याप्त मात्रामा पाएको छैन भने असमयमा नै बच्चा जन्मने सम्भावना बढी रहन्छ ।मानिस बुढो हुँदै गएपछि रोगहरुले सताउन थाल्छ । विशेष गरेर ५० को उमेर नाघेपछि धेरै रोगहरु देखापर्न थाल्छन् भने कतिपयमा क्यान्सर तथा हृदयरोगहरु देखापर्ने गर्छ । रोचक कुरा के छ भने, माछाको तेलमा पर्याप्त मात्रामा पाइने ओमेगा–३ एसिडले हृदयाघात तथा क्यान्सरको रोगसँग लड्न र त्यसलाई रोक्न समेत मद्दत पु¥याउने कुरा विभिन्न अध्ययनहरुबाट देखिएको छ ।
केही समय पहिले अमेरिकाको मिन्नेसोटा विश्वविद्यालयमा गरिएको अर्को एक अध्ययनले देखाएको छ, माछा नखाने मानिसको तुलनामा माछा खाने मानिसमा अत्यधिक धुम्रपानको कारण लाग्ने ब्रोङकाइटिस, दमजस्ता रोगहरुको असर कम हुने गर्छ । (यसको अर्थ माछा खाएपछि जति धुम्रपान गरेपनि हुन्छ भन्ने चाहिँ पटक्कै होइन ।) ८९६० जना मानिसहरुमा गरिएको सो अध्ययनमा ५५ प्रतिशत पहिले धुम्रपान गर्ने गरेका र ४५ प्रतिशत अहिले धुम्रपान गरिरहेका मानिसहरुलाई सहभागी गराइएको थियो ।
त्यस अध्ययनले के देखियो भने, त्यस्ता धुम्रपान गर्नेहरुमध्ये हप्ताको चार पटकसम्म माछा खाने धुम्रपानवालाहरुमा चुरोटको कारण हुने विभिन्न रोगहरु आधा कम लागेको देखियो । झन नियमितजसो माछा खानेहरुमा त त्यस्तो रोग अझ कम लागेको देखियो । बाथ तथा जोर्नी दुख्ने रोगहरुमा पनि ओमेगा ३ उपयोगी देखिएको छ । बाथ रोगीहरुले नियमित रुपमा माछाको तेल खाने हो भने रोगको असर निक्कै कम गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी बुढ्यौलीका कारण मानिसको कमजोर दृष्टि हुने तथा सोच्ने र सम्झने क्षमता घट्ने समस्यामा पनि माछा नियमित खाने गर्दा निक्कै फाइदा पुगेको कुरा अध्ययनबाट देखिएको छ ।
जानिराखाैं ! बिहीबारको दिन के गर्न हुन्छ के हुँदैन ?
आज फेरी थपिए ३३४ जना,नेपालमा कोरोना संक्रमितको कूल संख्या २६३४ पुग्ययो